‘कम्युनिष्ट बजेट’ माथि कांग्रेसको १४ बुँदे हमला « Lokpath
‘कम्युनिष्ट बजेट’ माथि कांग्रेसको १४ बुँदे हमला
काठमाडौं : कम्युनिष्ट बाहुल्य सरकारले ल्याएको अागामी अार्थिक बर्ष २०७५/७६ को बजेटमाथि संघीय संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले १४ बुँदे 'हमला' बोलेको छ ।
बुधबार पार्टी कार्यालय सानेपामा कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पत्रकार सम्मलेन गर्दै नयाँ बजेटमाथि पार्टीको अाधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । कम्युनिष्टहरूले चुनावमा बाँडेको घोषणापत्रमा निकै अाश्वासन बाँडेको, तर बजेट चाहिँ निकै निराशाजनक रहेकाे कांग्रेसको ठहर छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नाताले कांग्रेसले सरकारलार्इ मुलुकको उन्नती र समृद्दिका लागि सहयोग गर्ने बताएकाे छ ।
बजेटमाथि कांग्रेसको १४ बुंदे अालोचना यस्ता छन् ः
३. दुई कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा चुनाव मैदानमा प्रस्तुत घोषणापत्र, मतदाताको मतलाई बढी नै प्रभावित गर्ने मनसायका साथ आकाशको तारा झारेर नागरिकको हातमा राख्नेछौं भन्ने प्रकृतिको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा आइपुग्दा त्यो पारो क्रमश झ-र्यो र बजेटमा पुग्दा सपनाको इन्दे्रणी रंग खुइलिएको चित्र प्रष्ट छ ।
८. सबै दलको साझा प्रतिवद्धता शिक्षामा लगानीलाई २० प्रतिशत पु-याउने थियो । दुई कम्युनिष्ट पार्टीले यसलाई राम्रैसंग ब्रान्डिङ्ग पनि गरेका हुन् तर बजेटमा त्यो भएन । शैक्षिक क्षेत्रको नीतिगत, संरचनागत र समग्र सुधारमा सरकार गम्भीर देखिएन ।
प्रकाशित मिति: २०७५,जेष्ठ,१७,बिहीवार ०२:३५